နိုးထမှုသည် ငြင်းပယ်ခြင်းကို ကုသပေးသည်၊ | Revival Cures Rejection| Real Conversion
နိုးထမှုသည် ငြင်းပယ်ခြင်းကို ကုသပေးသည်၊
ဩဂုတ်လ ( ၉ ) ရက်၊ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကြောက်ခြင်းသံဝေဂနှင့်မပေါင်းနိုင်ရာ။ သံ ဝေဂသည် ပူပန်ခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်၊ စုံလင်သော မေတ္တာသည် သံဝေဂကို ဖယ်ရှားတတ်၏။ သံဝေဂရှိသောသူ သည် မေတ္တာနှင့်မပြည့်စုံသေး။” (( ၁ ယော ၄း ၁၈ )
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးက ဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသော ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ကြောက်ရွံ့နေကြသည့် လူ ၂၈၈ ဦး အကြောင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေး သားခဲ့ပါသည်။ လူအများစု ကြောက်ရွံ့သောအရာမှာ ငြင်းပယ်မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်း၊ သေမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အသက်ကြီးမည်ကို စိုးရိမ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲမည်ကို စိုးရိမ်ခြင်း၊ ဖျားနာမည်ကို စိုး ရိမ်ခြင်း၊ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မည်ကို စိုးရိမ်ခြင်းတို့ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစိတ်ပညာရှင်က “ငြင်းပယ် ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းအမှုသည် အကြီးမားဆုံးသောကြောက်ရွံ့ခြင်းပယ်ဖြစ်ပါသည်။ ငြင်းပယ် ခံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် သေမည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် ကြီးမားသည်” ဟုဆို သည်။ ထိုအကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လူတို့သည် ငြင်းပယ်ခံရသည်ထက် သေမည်ကို လိုလာကြမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Christopher Cagan က အခြားသော သင်တို့ထက် ကျွန်ုပ်ကို ပိုသိမည်။ သူက “ ဒေါက်တာ Hymers သည် ပုံမှန် မိသားစုတွင် ကြီးပြင်းလာသည်မဟုတ်။ သူသည် ထိုသို့ကြီးပြင်းလာခဲ့မည်ဆိုလျှင် အပြင်နှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပိုမိုတက်ကြွနိုင်ပါသည်။ သို့ ရာတွင် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငြင်းပယ်မှုအလုံးစုံတို့က သူအား ပြန်လည် လှည့်ပြန်လာစေသည်။ အ တွင်းသဘောကို သိသောသူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်က သူ့ကို အတွင်းသို့လှည့်ပြန်လာသူအဖြစ် တွေ့မိချင်မှ တွေးမိလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ကောင်းမွန်စွာ တရားဟော သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူသည် အတွင်းပိုင်းတွင် ခံစားတတ်သူပင်ဖြစ်ည်။ သူ့ အားနည်းချက်ကို အမြဲသိမှတ်သူပင်ဖြစ်ပါသည်” ဟု ဆိုပါသည်။ ဒေါက်တာ Cagan သည် အ မှန်တရားကို ပြောနေသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပျော်ရွှင်သောလူအုပ်ကြားထဲတွင် နေနိုင် သည်။ သူတို့နှင့်အပေါင်းအပါဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ခံစားချက် ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလာ သောအခါ သဘာဝတရားနှင့်ဆိုင်သောစိတ်ပျက်မှု၊ အထီးကျန်နာကျင်မှု၊ ငြင်းပယ်ခံရမှု၊ နှင့် ဖိ အားများကို ခံစားတတ်သည်။ ငြင်းပယ်မှုကို မခံစားသည့် တစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာ ကျွန်ုပ် တစ်ယောက်တည်းရှိနေသောအချိန် သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်သက်ရောက် သည်ဟု ခံစားရသောအချိန်တွင်ပင်ဖြစ်သည်။
အိမ်၊ အသင်းတော်တွင် ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ် ခံစားရသည့်အချိန်မှာ နိုးထမှုရှိသော အချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုအချိန်တွင် လူတို့၌ အမှန်တကယ် ဖြစ်လာပြီး ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်ဆန်သည့်ခံစားချက်များကို ပေးပျောက်စေခဲ့သည်။
လူငယ်တို့သည် အသင်းတော်သို့ရောက်လာကြသောအခါ အဘယ်သို့ခံစားရမည်ကို ကောင်းစွာ နားလည်ရသည့်အကြောင်းရင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့အား လက်ခံ ခြင်းနှင့်မေတ္တာကို ပေးသည်။ သို့ရာတွင် အကြိမ်အနည်းငယ် လာရောက်ပြီးနောက်တွင် သူတို့ သည် “အသင်းသား” ဖြစ်လာကြသည်ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ အဆင်ပြေသည်ဟု မှတ်ယူ တတ်ကြသည်။ နောက်မကြာတော့သည့်အချိန်တွင် သူတို့မလာခင်က ကဲ့သို့ပင် ငြင်းပယ် ခံရ ကြသည်ဟု ထင်မှတ်နေကြသည်။ ဆက်လက်နေထိုင်သည်ကို လက်သင့်ခံသည်ဟုမခံစားဘဲ သူတို့နှင့်နေနိုင်သောသူတို့သာရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်နေသကဲ့သို့ နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ် ကလည်း ငြင်းပယ်ခံရသည်ဟု ခံစားခဲ့ရသော်လည်း အသင်းတော်တွင် တွယ်ကပ်နေသည်။ အကြောင်းမှာ သွားစရာနေရာ မရှိတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထီးကျန်သူသာဖြစ်သည်။ သို့သော် အသင်းတော်၌မူ လူများစွာရှိကြသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် ငြင်းပယ်ခံရသည်ဟု ခံစား နေရသော်လည်း ဟန်ဆောင်ပြီး နေရသည်။ တနင်္ဂနွေညများတွင် အိမ်ပြန်သောအခါ ငြင်းပယ် ခံရသည်ဟုခံစားချက်သည် ဒလဟောကျလာသည်။ အလွန်ခေတ်စားသောသီချင်းက စိတ်ထဲ ရောက်လာသည်။ အိမ်ကနေမောင်းထုတ်ခံရသကဲ့သို့ “တဖန်အထီးကျန်ရသည်”။
အသင်းတော်တွင်ရှိသောလူငယ်တစ်ဦးက လက်ခံခြင်းနှင့်မေတ္တာကို ရှာဖွေနေကြ သည်။ သို့ရာတွင် အေးတိအေးစက်ခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်းသာ ခံစားရသည်။ အသင်းတော်ကို ထားရစ်ခဲ့သောလူငယ်တိုင်းက ထိုနည်းတူ ခံစားခဲ့ကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အသင်း တော်သည် ကတိထားသောအရာကို ပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
သူတို့က သီချင်းဆိုတာကြားပြီး အပြစ်မြင်သည်ဟု ခံစားလာကြသည်။ အသင်းတော်ကို ပစ် တင်စော်ကားလာကြသည်။ သူတို့မျက်နှာပေါ်တွင် အပြစ်မြင်သောအပြုံးကိုသာတွေ့ရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် “ချိုမြိန်သောမိဿဟာရ” အကြောင်း လိမ်လည်နေသည်ဟု သူတို့ခံ စားလာခဲ့ကြသည်။ “စားသောက်ဖို့အတွက် ထိုင်သောအခါ” သူတို့က ချိုမြိန်သော မိဿဟာရ ဟု မသတ်မှတ်ကြပါ။ သူတို့က “ဤလူတို့က ချိုမြိန်သောမိဿဟာရအကြောင်းကိုပြောကြ သော်လည်း မခံစားကြပါ။ ဒေါက်တာ Hymers ကိုယ်တိုင်လည်း မခံစားပါ” ဟုဆိုကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် ကမ္ဘာကြီးဆီခရီးသွားခြင်းကို ရပ်တန့်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ကမ္ဘာကြီး ဆီသို့ပြန်သွားကြသည်။ အကြောင်းမှာ အသင်းတော်ထက် ပိုဆိုးသည့် ခံစားချက်မရှိခဲ့ကြပါ။ အနည်းဆုံးတော့ ကမ္ဘာကြီးသည် “ချိုမြိန်သောမိဿဟာရ” အကြောင်းကို မလှည့်စားခဲ့ပါ။ သင်သည် သင့်အားလက်ခံသောသူကို ဤကမ္ဘာကြီးထဲအသက်ရှင်စဉ် အနည်းဆုံးတစ် ယောက်တော့တွေ့နိုင်သည်။ အသင်းတော်တွင် လုံး၀မတွေ့ရသောအရာဖြစ်သည်။ သင် တွေ့ဆုံခဲ့သမျှသည် မှားယွင်းမှု၊ အေတိအေးစက်ခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
အသင်းတော်ထဲတွင် ခရစ်ယာန်တို့၏မေတ္တာကနေ အဘယ်အရာက တားဆီးနေပါ သနည်း။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်မေတ္တာကို ခိုးယူခံရခြင်းမှာ ကြောက်စရာကောင်းပါသည်။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်အား မည်သို့ထင်မြင်ကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်အကြောင်းကို မည်သို့ပြောဆိုကြ မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်ကို အမှန်တကယ္ သိကြပါရဲ့လား။ ကျွန်ုပ်စဉ်းစားသောအရာ သို့မဟုတ် ခံစားသောအရာကို သူတို့သည် အမှန်တကယ် သိကြပါရဲ့လား။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်ကို ငြင်း ပယ်ကြသည်။ ၎င်းမှာ သူတို့လုပ်ဆောင်သောအရာဖြစ်သည်။ ငြင်းပယ်ခံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ ခြင်းသည် ကြီးမားသောကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ သေခြင်းကို ကြောက်ခြင်းထက် ကြီးမားသည်။ နာဖျားမည်ကို ကြောက်ခြင်းထက် ကြီးမားသည်။ မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိသည့်အခြားကြောက်ရွံ့ ခြင်းထက် ကြီးမားသည်။ ထိုအကြောင်းကို ကဗျာဆရာ Robert Frost က ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြ ထားပါသည်။ ၎င်းရေးသားသော ကဗျာကို “ဖော်ပြချက်” ဟု ခေါ်ဆိုကြပါသည်။
မိမိကိုယ်ကို နေရာတစ်ခုအဖြစ် ပြင်ဆင်သောအခါ၊
လူတစ်ဦးက ကျွန်ုပ်တို့အား အမှန်တကယ် တွေ့သည့်တိုင်။
အဆုံးတွင်ရှိသော (သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ဆိုသော)
ဘုရားသခင်က မြင်သည့်တိုင်အောင် ရှာဖွေထား။
ရှိသည်အရပ်က ပြောရမည်၊ ကျွန်ု္ပ်တို့ကို။
(“ဖော်ပြချက်”၊ Robert Frost, ၁၈၇၄-၁၉၆၃ )
ထိုအကြောင်းအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေပြုကျမ်းစာကို သယ်ဆောင်လာသည်။
“ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကြောက်ခြင်းသံဝေဂနှင့်မပေါင်းနိုင်ရာ။ သံ ဝေဂသည် ပူပန်ခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်၊ စုံလင်သော မေတ္တာသည် သံဝေဂကို ဖယ်ရှားတတ်၏။ သံဝေဂရှိသောသူ သည် မေတ္တာနှင့်မပြည့်စုံသေး။” (၁ ယော ၄း ၁၈ )
ငြင်းပယ်ခြင်းအကြောင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကို မည်သို့ ကျော်လွှားနိုင်မည်နည်း။ စုံလင်သော မေတ္တာအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် “စုံလင်သော” မေတ္တာကို မည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။ “နင့်ကို ငါချစ်ပါသည်။ နင့်ကို ငါချစ်ပါသည်” ဟု ပြောဆိုရုံသက်သက်အားဖြင့် တော့မဟုတ်ပါ။ ၁ ယော ၃း ၁၈ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ “ချစ်သားတို့၊ ငါတို့သည် စကားပြောကာမျှအားဖြင့်သာမချစ် ဘဲ၊ စိတ်ပါကိုယ်ရောက်ဧကန်အမှန် ချစ်ကြကုန်အံ့” ဟုဆိုထားသည်။ အဘယ်သို့လုပ်ဆောင် ကြမည်နည်း။ လွယ်ကူသောအရာတော့မဟုတ်ပါ။ ထိုအရာကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငြင်းပယ်ခံရကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုးထမှုကို အမှန်တကယ် လိုအပ်သည်ဆိုလျှင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာကိုလုပ်ဆောင်ရန် မိမိကိုယ်ကို တွန်းအားပေးရမည်။ “ကျွန်ုပ်တို့သည် မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏နားလည်မှုကို ရရှိရန် တိုက်ရိုက်ပြောဆိုရန်ဖြစ်သည်။” “ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာ ဝှက်ထားသောသူသည် မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောဆိုရမည်။” ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုး ထမှုကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်လျှင် ထိုသိုသောဖော်ပြချက်ကို အမှန်တကယ် ရရှိရမည်။ ၁ ယော ၁း ၉ နှင့် ၁၀ ကို ဖတ်ရှုကြပါစို့။ ၎င်းကို ဖတ်ရှုကြမည်ဖြစ်၍ အားလုံးမတ်တပ်ရကြပါစို့။
“ကိုယ်အပြစ်ကို ဖော်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာတ ရားနှင့်၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံတော်မူ၏။ ဒုစ ရိုက်ကိုမပြုပြီဟု ငါတို့သည်ဆိုလျှင်၊ ဘုရားသခင်ကို မုသာအပြစ် တင်ကြ၏။ နှုတ်ကပါတ်တော်လည်း ငါတို့၌ မရှိ။” ( ၁ ယော ၁း ၉၊ ၁၀ )
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ု္ပ်တို့အပြစ်များကိုဝန်ခံခြင်းသည် နိုးထမှုအတွက် အဓိကသော့ချက် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို မျက်ရည်ဖြင့် ဝန်ချတောင်းပန်ရမည်။ စကားဖြင့် ဝန်ခံရုံသက်သက်မဟုတ်၊ တရုတ်ပြည်၊ နှင့်စစ်မှန်သော နိုး ထမှုအားလုံးတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်အတိုင်း မျက်ရည်ဖြင့် ဝန်ချတောင်းပန်ရမည်။ Brian Edwards က “အပြစ်ကိုသိမြင်သည့်မျက်ရည်မပါဘဲ နိုးထမှုမရှိ” ဟူ၍ မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြထား ပါသည်။ (နိုးထမှု၊ စာ- ၁၁၅) ထပ်၍ သူပြောဆိုသည်မှာ “အပြစ်ကို နက်နက်နဲနဲ၊ သက် သောင့်သက်သာမရှိ၊ နှိမ့်ချလျက် ဝန်ခံခြင်းမရှိလျှင် နိုးထမှုမရှိနိုင်ပါ” (စာ- ၁၁၆) ဟုဆိုပါ သည်။ “အပြစ်ကို နက်နဲစွာသိမြင်ခြင်းသည် လူတို့က မိမိတို့အပြစ်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီး မုန်းတီး ကြရန်ဖြစ်သည်။” (စာ- ၁၂၂) အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းသည် နိုးထမှုအတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ် ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားလျှင် မျက်ရည်ဖြင့် ဘုရားသခင်အား ဝန်ချ တောင်းပန်ရမည်။ သို့ဆိုလျှင် သူသည် “မဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ ငါတို့ကို သန့်ရှင်းစေလိမ့်မည်။” အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး “ကိုယ်တော်ဘုရား၊ စစ်ကြောတော်မူပါ” ကို သီဆိုကြပါစို့။
( ဆာလံ ၁၃၉း ၂၃-၂၄ )
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုးထမှုကို အပြည့်အဝမခံစားနိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆို သော် “နှောက်ယှက်ဆန့်ကျင်သော (လှောင်ပြောင်သည်၊ သရော်သည်၊ ပျက်ရယ်ပြုသည်၊ ဟာသလုပ်သည်)ပေါ့ပါးသည့်စကားလုံးနောက်ကွယ်တွင် နေရာတစ်ခုကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်” လုပ်ဆောင်သည်။
သို့ရာတွင် ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သာ၍ နက်နဲစွာ သွားရမည်။ ယာ ကုပ် ၅း ၁၆ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုမည်ဖြစ်၍ အားလုံး မတ်တပ်ရပ်ပေးကြပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။
“အချင်းချင်း၊ တယောက်နှင့်တယောက်၊ ကိုယ်အပြစ်ကို ဖော်ပြ တောင်းပန်ကြလော့။ ချမ်းသာရမည်အကြောင်း၊ အချင်းချင်းတို့အ ဘို့ ဆုတောင်းကြလော့။”
( ယာကုပ် ၅း ၁၆ )
ထိုင်နိုင်ပါပြီ။ Matthew Henry က ဤသို့ဆိုပါသည်။
ဤနေရာတွင် တောင်းဆိုထားသောဝန်ခံခြင်းမှာ ခရစ်ယာန်တို့အ နေဖြင့် တဦးအပေါ်တစ်ဦး ဝန်ခံခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ခံခြင်း သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် သူတို့ကို အနိုင်ယူသောတန်ခိုးကို ရရှိဖို့ရန် ၎င်းတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးကူညီ သောအရပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းကဲ့သို့သောအ ရာများတွင် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန် လိုအပ်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး မိမိအပြစ်ကို ဝန်ခံသောသူသည် အခြားသူ နှင့် သို့မဟုတ် အခြားသူအတွက် ဆုတောင်းသင့်သည်။
ယာကုပ် ၅း ၁၆ နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အသုံးချဓမ္မသစ်အနက်ဖွင့်ကျမ်းက ဤအယူအဆကိုပေးပါ သည်။
စစ်မှန်သောမိဿဟာရရှိခြင်းဟူသည်မှာ မိမိအပြစ်ကို တစ်ဦးကို တစ်ဦး ဝန်ခံခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်သောအခါ ဝိညာဉ်ရေးရာအနာငြိမ်းခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး အပြစ်လျှိုထားခြင်းမပြုသင့်ပေ။
ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် အခြားသူများကို ပြစ်မှားတတ်ကြသည်။ တကိုယ်ကောင်းဆန် ခြင်းကြောင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးချစ်ခြင်း၌ နောက်ဆုံးတွင် နောက်ပြန်လဲကြသည်။ အသင်းတော် တွင်ရှိသောသူတစ်ဦးက သူ့အား ပြောသည့် မကောင်းသောစကားအကြောင်းပြောသည်။ လူ တစ်ဦးက သင်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အလေးအနက်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ သခင်ဘုရားအတွက် သင် လုပ်ဆောင်သောအလုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမျှ ချီးမွမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်အား က မောက်ကမဖြစ်စေသောအရာကို တစ်ဦးဦးက ပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်ခံစားချက်ကိုလည်း နာကျင် စေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုသောအပြစ်ကို မဝှက်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ကို ခံ စားရရှိနိုင်ရန်မှာ ကောင်းမွန်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နာကျင်မှုနှင့်ပူဆွေးသော ကကို ဆုပ်ကိုင်ခြင်းက အခြားသူများအပေါ် ချစ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ “ဤနက်နဲသော အပြစ်ကိုမြင်ခြင်းက လူသိရှင်ကြား ဝန်ခံခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ မှားယွင်းသောဆက်နွယ်မှုကို မှန်ကန်စွာချထားပေးသည်။ ဘုန်းအသရေနှင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို ခံစားရသည်။ အပြစ်ကို သိ မြင်ခြင်းလဲရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်၏လူတို့တွင် စတင်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ မျက်ရည်နှင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီသော ဝမ်းနည်းသောကရှိသည်။ အမှန်ပြင်ဖို့ မှား ယွင်းသောအရာရှိသည်။ လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအရာရှိသည်။ လူတို့မမြင်နိုင်သောအရာဖြစ် သည်။ မကောင်းသောဆက်နွယ်မှုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါသည်။ ဤသို့လုပ် ဆောင်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းမခံရလျှင် နိုးထမှုအတွက် ဆုမတောင်းလျှင် ပို၍ပင် ကောင်းပေလိမ့် မည်။ နိုးထမှုဆိုသည်မှာ အသင်းတော်၏ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးခြင်းမဟုတ်။ ၎င်း၏အပြစ်ကို ဆေးကြောခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် မသန့်ရှင်းသောအသင်းတော်ရှိသည်။ အ ဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်ယာန်များသည် အပြစ်ကို ဘာမျှ မထင်ကြပေ။ “(အခြားသူများထံ တွင်လည်း မျက်ရည်ဖြင့် ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းကိုလည်း မမှုကြပေ။)” (Edwards, နိုးထမှု၊ စာ- ၁၁၉၊ ၁၂၀ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး မှားယွင်းမှုကို မျက်ရည်ဖြင့် ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း မရှိသ၍ စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် ပျော်ရွှင်မှုမရရှိပါ။ ဤအရာသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ် ထရှိသောအရာပင်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်တွင် အဘယ့်ကြောင့် မဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ရန်မှာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများ တွေးထင်မည့်အရာ ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ နတ်ဆိုးသည် ဤကြောက်စိတ်ကို အသုံးပြုပြီး ဝန်ခံ ခြင်းကို ရပ်တန့်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အခြားသူများပြောဆိုတွေးတောမည့်အ ရာ ကြောက်ရွံ့နေမှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နိုးထမှုကြောင့်ရရှိသောဝမ်းမြောက်ခြင်းထဲက နတ် ဆိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ နတ်ဆိုးက ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ကို အား နည်းခြင်းနှင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေခြင်းတွင် ကြောက်ရွှံ့ခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း နားလည်ထား ပါသည်။ အခြားသူများတွေးတောဆင်ခြင်မည့်အရာကြောက်ရွှံ့ခြင်းက ဝန်ခံခြင်းနှင့် စိတ်ဝိ ညာဉ်အနာငြိမ်းခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ရပ်တန့်စေသည်။ ဟေရှာယက “သရသောလူကို၎င်း၊ မြက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်လတံ့သောလူသားကို၎င်း၊ သင်သည် ကြောက်ရမည်အကြောင်း၊ အဘယ်သို့ သော သဘောရှိသနည်း ….. သင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော ထာဝရဘုရားကို သင်သည် မေ့ လျော့၍၊” (ဟေရှာယ ၅၁း ၁၂၊ ၁၃) သမ္မာကျမ်းစာက “လူကိုကြောက်ခြင်းသဘောသည် ကျော့ကွင်းကို ထောင်တတ်၏။” ( သုတ္တံ ၂၉း ၂၅ ) သုတ္တံ ၂၈း ၁၃ ကို အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး ဖတ်ရှုကြပါစို့။ ၎င်းသည် Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၆၉၂ တွင် ရှိပါသည်။ လူတိုင်းအသံကျယ်ကျယ် ဖတ်ရှုကြပါစို့။
“မိမိအပြစ်ကိုဝှက်ထားသောသူသည် ချမ်းသာမရ။ မိမိအပြစ်ကို ဖော်ပြဝန်ချ၍ စွန့်ပစ်သောသူမူကား၊ ကရုဏာတော်ကို ခံရလိမ့် မည်။” ( သုတ္တံ ၂၈း ၁၃ )
“ဘုရားသခင်၊ စစ်ကြောတော်မူပါ၊” သီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့။
အသင်ရှင်သောဘုရားဝိညာဉ်၊ ဆင်းသက်ရန် ဆုတောင်းပါ၏၊
အသက်ရှင်သောဘုရားဝိညာဉ်၊ ဆင်းသက်ရန် ဆုတောင်းပါ၏။
ကျွန်ုပ်အား ပြုပြင်၊ ချိုးဖဲ့၊ နှိမ့်ချစေပါ။
အသက်ရှင်သောဘုရားဝိညာဉ်၊ ဆင်းသက်ပါ၊ ဆုတောင်းပါ၏။
( “အသက်ရှင်သောဘုရားဝိညာဉ်”၊ Daniel Iverson, ၁၈၉၉-၁၉၇၇;
သင်းအုပ်က ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။ ).
ခရစ်တော်က “ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏” ဟုမိန့်တော်မူသည်။ ၎င်း က ၎င်းတို့အပြစ်ကို ဝန်ခံပြီး ထိုအပြစ်အပေါ် ဝမ်းနည်းခြင်းရှိသူများကို ဆိုလိုသတည်း။ နိုးထမှု ကို မျှော်လင့်သောသူများအဖို့ အပြစ်သည် ပြဿနာပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိုးထမှုဟုဆိုရာတွင် ကမ္ဘာကြီးက လုံး၀ မမြင်တွေ့နိုင်သော အတွင်းပိုင်းအပြစ်အကြောင်းကို အမြဲတမ်းစဉ်းစား ဆင်ခြင်စေသည်။ နိုးထမှုက ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးထဲက အတွင်းပိုင်း အပြစ်များကို လွင့်စင်စေ သည်။ Evan Roberts သည် နိုးထမှုအတွက်ပြင်ဆင်ရန် မိမိ၏အသင်းသူ၊သားများကို ခွန် အားပေးတိုက်တွန်းသောအချိန်တွင် လူတို့ကို ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိသ၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ဆင်းသက်လာမည်မဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သူက “မကောင်းသောခံစားချက်ဟူသမျှကို ပစ်ပယ်ရမည်” ဟုဆိုသည်။ မကောင်းသောခံစားချက်များမှာ ခါးသီးခြင်း၊ သဘောထားကွဲလွဲ မှုများ၊ အမျက်ဒေါသများ ပင်ဖြစ်ကြသည်။ သူသည် ခံစားနေလျှင် လူတစ်ဦးကို ခွင့်မလွှတ်နိုင် ပါ။ ခွင့်လွှတ်စိတ်ကို ဘုရားသခင်ထံ ဒူးထောက်ပြီး ဆုတောင်းပါ။ အခြားသူများထံသို့သွား၍ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို တောင်းခံလိုရမည်။ သို့မှသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ ချိုမြိန်သော မျက် မှောက်တော်ကို ရရှိမည်။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောခရစ်ယာန်များသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ မေ တ္တာနှင့်သန့်ရှင်းသောမေတ္တာကို ခံစားနိုင်ကြသည်။ နိုးထမှုနှင့်ယှဉ်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ကဲ့သို့ မသန့်ရှင်းသောအသင်းတော်ဆီသို့ မျက်ရည်ဖြင့် အပြစ်ဝန်ချ တောင်းပန်ခြင်းမရှိလျှင် သက်ရောက်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်မှ သာလျှင် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ညီအစ်မက တနင်္ဂနွေည ဝန်ခံခြင်းအတွက် ဆုတောင်းရန် အခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် “ကျွန်ုပ်ရူပါရုံကို ပြည့် စေပါ” ကို တီးခတ်သီဆိုမည်။ တနင်္ဂနွေညတွင် မည်သို့သောအပြစ်မျိုးကို ဝန်ချတောင်းပန်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သင်နှင့်အခြားသူများအား ပြသရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား ဆု တောင်းပါ။ တစ်ဦးထံတစ်ဦးသွားပါ။ နှစ်ယောက်ချင်း သို့မဟုတ် သုံးယောက်ချင်းစု၍ တနင်္ဂ နွေည အပြစ်ဝန်ခံခြင်းအတွက် အပြင်းအထန်ဆုတောင်းပေးပါ။ ယခုတွင် မတ်တပ်ရပ်ပြီး “ရူပါရုံကိုပြည့်စေပါ” သီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့။ ၎င်းသည် နံပတ် ၁၇ ပင်ဖြစ်သည်။
ရူပါရုံကို ပြည့်စေပါ၊ ဆုတောင်းပါ၏၊ ကယ်တင်ရှင်၊
အထက်အရပ်က အလင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်လမ်းကို လျှံထွက်စေပါ။
( “ရူပါရုံကိုပြည့်စေပါ”, Avis Burgeson Christiansen, ၁၈၉၅-၁၉၈၅ )
ယခုတွင် “ဤအရာကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုသည်” ကို သီဆိုကြပါစို့။ ၎င်းသည် သီချင်းစာရွက် ထဲတွင် စာမျက်နှာ ၁၈ ဖြစ်ပါသည်။
အနီးပတ်ဝန်ကျင်တွင် ရှိသူအားလုံး နွေးထွေးမှုကို ခံစားရမည်အမှန်။
ဘုရားမေတ္တာထိုနည်းတူစွာ၊ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ တွေ့ကြုံရင်လေ၊
လူတိုင်းဆီမှာ သူ့မေတ္တာတိုးပါြး၊ သင်သည် လက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှထား။
ကျေးငှက်များသီဆိုကြ၊ ပန်းမန်များ ယိမ်းယိုင်းကခုန်ကြ။
သင်အတွက်တောင်းဆုပြုနေမိတ်ဆွေ၊ ဤဝမ်းမြောက်ခြင်း ကျွန်ုပ်ရှာတွေ့၊
သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ၊ သင်ရှိနေသောအရပ်သည် အရေးမကြီးပါ။
တောင်ထိပ်မှစ၍၊ ကျွန်ုပ်အော်ဟစ်မည်၊ ကမ္ဘာကြီးအား သိစေလိုသည်၊
ခရစ်တော်၏မေတ္တာရရှိပြီး၊ လူတိုင်းထံ လက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှလိုသည်။
(“လက်ဆင့်ကမ်းပါ” ၊ Kurt Kaiser, ၁၉၆၉;သင်းအုပ်က ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါသည် ).
“နိုးထမှု တဖန်ဖြစ်စေပါ"၊ (William P. Mackay, ၁၈၃၉-၁၈၈၅ ရေးစပ်သည်။ )